अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ Archives ~ Page 24 of 24 ~ Banking Khabar
छिमेकी मुलुक भारतमा यसरी चल्छन् बैँक तथा वित्तीय संस्था
भारतमा अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर आधुनिक बैँकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । भारतमा औपचारिक रुपमा बैँकिङ कारोबारको सुरुवात गर्ने पहिलो बैँकको रुपमा हिन्दुस्तान बैँकको स्थापना सन् १७७० मा भएको थियो । त्यस्तै, जेनेरल बैँक अफ इन्डिया सन् १७८६ मा स्थापना भएको थियो । तर, सन् १७९१ भन्दा बढी समय चल्न सकेन । हालसम्म सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा
संसारका सबैभन्दा पुराना ५ बैँकहरु, जसले रचे बैँकिङ इतिहास
नेपालमा लगभग ८५ वर्ष पहिले नै सिक्काको प्रचलन सुरु भएको थियो । वि.सं. १९९४ मा नेपालको पहिलो बैँकको रुपमा नेपाल बैँकको स्थापना भइसकेको थियो । त्यस्तै, वि.सं. २००४ मा नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात भइसकेको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैँकको स्थापना भएको थियो । नेपालको बैँकिङ इतिहास ज्यादै लामो नभएता पनि विश्वका अन्य
अमेरिकी बैँकविरुद्ध मुद्धा हाल्दै बंगलादेश बैंक
बंगलादेश बैंकले एक अमेरिकी बैँकविरुद्ध मुद्धा हाल्ने भएको छ । कानुनी लडाइँ लड्ने भएको छ । साइबर चोरीको चपेटामा परेको बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक बंगलादेश बैंकले आफ्नो खाता रहेको अमेरिकी बैंक फेडेरल रिजर्व बैंक अफ न्युयोर्कमाथि कानुनी लडाईँ लड्ने बताएको हो । बंगलादेश बैंकको न्युयोर्कमा रहेको खाताबाट ८ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम चोरी
संसारकै उत्कृष्ट बैँकहरु चिन र अमेरिकामा
संसारमा पैसाको महत्व बढेसँगै यसको उचित व्यवस्थापनका लागि बैँकिङ प्रणालीको अवधारणाको सुरुवात एवम् विकास भएको पाइन्छ । मानिसका असिमित आकांक्षा र खोज प्रवृत्तिका कारण बैँकिङ प्रणालीमा पनि विभिन्न चरणामा विकास एवम् विस्ता भइरहेका छन् । कारोबार, व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग तथा सम्पन्नताका आधारमा हेर्दा विशेषतः धनी तथा समृद्धशाली मुलुकका बैँकहरुको नाम अगाडि आउँछ । संसारका उत्कृष्ट
विश्वमा जति पनि मुलुकहरु छन्, तिनको आफ्नै किसीमका नोट तथा मुद्राहरु छन् । मुलुकैपिच्छे अलग किसिमको मुद्राको प्रयोग भईरहेको हुन्छ । यद्यपी कुनै देशको पैसाको मूल्य वा महत्व मजबुत हुन्छ भने कुनै देशको कमजोर मानिन्छ । बैंकिङ खबर डटकमले विश्वभर प्रयोग हुने मजबुत ५ मुद्राहरुको बारेमा जानकारी दिने कोशिस गरेको छ । १.अमेरिकन डलर